Geranium - owaziwa izitshalo. Baye kwakuqala ukwanda ngenxa undemanding, inflorescences enhle acacile futhi inkathi zezimbali eside. Lezi zitshalo babaziwa eGrisi lasendulo. EYurophu lehla ngokushesha inani bavela ngekhulu XVII-XVIII, futhi zenzeka ekhulwini lamashumi amabili Iye yaba khona izinhlobo eziningi ezahlukene ukuthi babe ukuma ezahlukene kanye nombala of izimbali kanye namahlamvu. Kwakunesidingo futhi hang-ukubeka phansi etholakala geranium. It is zihlukaniswa eside, isiswebhu-like amahlumela ukuthi ukudala impophoma enhle zasemazweni aminyene futhi ezimibalabala Corolla imbali amaqoqo. Kusukela nezinye izinhlobo ungabahlukanisa nangokuzama amapheshana bushelelezi (zinhlobo Ngabaqotho lamina pubescent).
Ampelnye geranium njalo seliphindeke izikhathi ezingaphezu ayisikhombisa izinhlobo, futhi konke izidingo esikhethekile ukunakekelwa. Okokuqala, kuzomele kube ngabo ukukhetha indawo ngokwanele esikhanyayo. It is kangcono iwindi eningizimu, kodwa imbali ahlele futhi Western. Ngakolunye geranium hang-ukubeka phansi ungayeka zom ngisho ulahlekelwe amahlamvu. Amazinga kufanele kube ngu-25 ° C ehlobo hhayi ngezansi 15 ° C ebusika. Phakathi nezinyanga zasehlobo, lesi sitshalo Kudinga ukuthambisa obuningi, kodwa akakubekezeleli amanzi amile, ngakho qiniseka ukuthi abe amanzi okuhle ebhodweni. Ehlobo ezweni kufanele kube njalo esemanzi ebusika kungcono nisela isitshalo njalo emavikini 1-1.5. Gcina amahlamvu bawa kancane njengoba amanzi kungenzeka - ingaqala elibi noma kubangele isifo eyingozi. Zama ukudicilela isitshalo noma kuso, noma izimpande - ukuze ukwazi ukugwema umswakamo amahlamvu. Akathandi hang-ukubeka phansi geranium futhi izifutho, kanjalo laba ukwelashwa ngangokusemandleni - isitshalo kuyoba enempilo.
Lapho ekhetha imbiza ukuthatha likhulu kakhulu. Isikhathi ukuqhakaza phakathi impande kanye odongeni isitsha kufanele kube 2-3 cm. Ukuze phansi hang-downing geranium linesizotha. Ukuze kusaladi kungaba yisiphi Umanyolo eziyinkimbinkimbi nge wokuqukethwe lelisetulu potassium. I njalo inqubo ehlobo - kanye ngenyanga, ebusika phakela kungcono ukuba nidede. Repot lesi sitshalo kuyadingeka kanye eminyakeni emibili, kuyinto efiselekayo - entwasahlobo. Umhlabathi kungcono ukwengeza ingxenye encane Peat - ke zizosheshisa engraftment izitshalo. Uma kungenjalo ezidingekayo, ungavele ukususa inhlabathi ubudala futhi esikhundleni saso alethe ukwanda entsha ebhodweni.
Okusakazwa ampelnye imbewu geranium futhi cuttings. Ukusetshenziswa imbewu - kuwumsebenzi onzima futhi eziyinkimbinkimbi, kuba lula kakhulu ukuba esiphelweni vegetative. Izingcezu cuttings omile emoyeni evulekile emini, bese elicwiliswe powder carbon. Ukungcola ingxube yalungiswa: thatha Peat, isihlabathi futhi phansi ishidi ezingxenyeni alinganayo, ke Kwenziwa decontamination: uthele amanzi abilayo bese efakwa kuhhavini imizuzu 20-25. Lapho inhlabathi selupholile phansi, ungaqala kokwehla. Ukhula lwenkohlakalo egcwele kwenzeka ngenyanga. ngokuvamile izitshalo batshala entwasahlobo, ehlobo lika-ukukhiqiza izimbali kuqala.
Uma ufuna kahle ukuhlobisa balcony, ifasitela, ohlanzekile amagquma - ke ngeke ivumelane geranium hang-ukubeka phansi. Ukunakekela ke nakuba kunjalo ngokukhethekile, kodwa hhayi isikhathi esiningi, kodwa umbono zezitshalo ezifana muhle, inkathi zezimbali - eside, umbala - elikhanyayo. Babukeka zokuhlobisa kakhulu. Izimbali elula noma kabili, Pinkish, obomvu, omhlophe, ukukhanya amathoni oluhlaza, noma ngaphandle umphetho - konke geranium hang-ukubeka phansi. Izithombe lezi zitshalo ngeke abashiye ubani ongumthandi sokunganaki izitshalo zasendlini. Khetha ukunambitheka yakho futhi ujabulele ubuhle!
Growing Cleomenes - engavamile zezimila eziqhakazayo
Indlela ukukhetha amahle linesizotha igumbi imbali?
Senza zomkhosi imvunulo iqhude
Horror movie mayelana emaphaphethi, entsha hhayi ngakho
Indlela ushawa Ngokuphambene ngendlela efanele. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ka eshaweni Ngokuphambene
408 osezingeni Cheyenne Tactical: Izimpawu kanye nenhloso
Ikesi izinduku - isipho kangcono umdobi
Lipstick "Lady" ( "Avon"): ukubuyekezwa, izincomo ukukhetha
Ingulube entanyeni kuhhavini. ukupheka zokupheka